सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २२ चैत २०७७)
कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुनलामा बिहीबार ३ दशमलव ९९ प्रतिशतले घटेको छ । शेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७४५ मा झरेको हो । अघिल्लो दिन बुधबार कम्पनीको शेयर मूल्य रु. ७७६ मा बन्द भएको थियो ।
कम्पनीको शेयर मूल्य तीन दिनदेखि लगातार बढेकामा बिहीबार लगानीकर्ताले प्रोफिट बुक गरेकाले घटेको हो । कम्पनीको नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुनलामा चालू आवको सोही अवधिमा ६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
रु. २ करोड ९६ लाख नाफा कमाएको छ । गत आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रु. १ करोड ८२ लाख नाफा कमाएको थियो । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रु. ५ दशमलव ९४, मूल्य आम्दानी अनुपात रु. १०२ दशमलव ४१ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रु. ११४ दशमलव १८ रहेको छ ।
कम्पनीको ६१ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा कालो ओपनिङ मारुबोजू बनेको छ । यस्तो आकृतिले बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य घट्ने संकेत गर्छ । आरएसआई न्युट्रलजोन ६७ दशमलव ५२ बिन्दुमा छ ।
यसले शेयर खरिद बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ५५ दशमलव ३० बिन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कमहुने गर्दछ ।
त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकै बिन्दुमा छन् । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । बिहीबारको शेयर मूल्य रु. ७४५ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. ७०३ मा टेवा पाउने र महँगिए रु. ७७६ मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ ।